Xasan Sheekh “ Dowladda Imaaraadka Fara gelin kuma heyso Arrimaha Doorashada Soomaaliya”+Cod | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Xasan Sheekh “ Dowladda Imaaraadka Fara gelin kuma heyso Arrimaha Doorashada Soomaaliya”+Cod
Madaxweynaha Somaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa ka hadlay warar maalmihii dambe la hadal haayay oo ku aadan in Dowladaha qaar ee Somaliya taageera ay wadaan olole ku aadan ruux ay la doonayaan Doorashada Somaliya inuu ku soo baxo.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa wuxuu sheegay inaysan jirin raad ay ku leeyihiin dad Ajnabi ah Doorashada Somaliya, isaga oo sheegay Doorashada inay ka duwan tahay sidii hore.
Waxa uu tilmaamay Marxalada Doorashada Somaliya inay hada tahay mid adag oo ka duwan tii hore, maadaama go’aanadii hore ee Doorashada ay ahaayeen kuwa gacanta ugu jiray Odayaal kooban, balse hada Ergooyin ay soo dooranayaan Xubnaha Aqalka hoose.
“Doorashada Somaliya waxa ay ka timid markii hal qof uu go’aanka yaa Xildhibaan noqonaya lahaa waa ay ka timid 51 qof oo reer Hebel ah oo jufo hebel ah oo Degmo hebel ka yimid, magaranaayo aniga dad Ajnabi ah sida ay raad ugu yeelan karaan oo ay go’aanadooda iyo rabitaankooda wax uga bedeli karaan Doorashada dadkaan Somaliyed Eedo Caasho oo gees ka timid iyo Adeer Cabdulle oo geeska kale ka yimid ayaa iska leh Doorashada, Dad ajnabi ahna raad kuma yeelan karaan.” Ayuu yiri Madaxweyne Xasan.